NOENDAHIN’ILAY MPAMILY BAJAJ : Lasa ny vola 600 000ariary sy ny firavaka rehetra
Nanangan-tsampona indray ny mpamily bajaj aty Antsiranana. Ramatoa iray niaraka tamin’ny zanany no notafihan’ny mpamily bajaj sy ny namany roa, ny harivan’ny alatsinainy 2 oktobra lasa teo. 6 octobre 2017
Araka ny vaovao voaray dia efa mpamily voatokana ho an’ity renim-pianakaviana lasibatra ity izy io. Maka ary manatitra ny zanany avy mianatra no nahavanon-doza izao, izay nivadi-pitikisana. Mpivarotra ireny firavaka volamena sy volafotsy ireny no asan’ity vehivavy ity. Toy ny mahazatra dia avy naka azy mianaka ireo hamonjy fodiana ity mpamily kodiarana telo ity ny harivan’io alatsinainy io.
Matetika rehefa amin’ny hariva dia tena mitohana ny fifamoivoizana amin’iny lalana Justin Bezara iny noho ny hamaroan’ny fiara mivezivezy, ka voatery nivily tany amin’ny Point Six iny ilay mpamily bajaj.Tonga teo amin’ny sampanana manakaiky ny tsena iny, dia tampoka teo nisy tovolahy roa no nijanona tahaka ireny mpandeha ireny. Nilaza ny tsy mitondra mpandeha hafa ilay mpamily fa ireto farany dia niditra an-keriny sady nipetraka teo ambony fen’ilay ramatoa. Niezaka nidina ity farany fa tsy afaka nanohitra noho ny hery tsy mitovy.
Noteren’ireto marofelana ireto ilay mpamily ny hanaraka lalana mahazo mitabe iny. Mody novelezin-dry zalahy vato ny lohan’ilay mpamily, ary nofehezin’izy ireo izy mianaka. Lasa tamin’izany ireo volamena sy volafotsy sy ny vola mitentina 10 tapitrisa Ariary araka ny fanambarana nataon’ilay ramatoa. Milanja 490 grama ny volafotsy ary 250 grama ny volamena. Avy hatrany dia nosamborin’ny polisy ilay mpamily nanaovana fanadihadiana.
Tamin’ny voalohany dia nanohitra ity farany fa tsy mahafantatra ireo roalahy nahavanon-doza ireo. Fa tamin’ny farany dia niaiky ihany ilay zalahy ary nanoro ny toerana ahitana ireo namany roa ireo ny talata 3 oktobra teo. Tao amin’ny fokontany Ambalavola sy Ambohimitsinjo no nahatrarana azy ireo ary mbola tratra teny ireo volamena sy volafotsy ary ny vola 600 000Ariary. Nandritra ny fisavana nataon’ny polisy ireto jiolahy ireto dia nahitana saron-tava, antsibe sy fitaovana izay heverina fa fitondra manafika. Araka ny fantatra hatrany dia efa mpamerina heloka ihany koa ny iray hafa tamin’ireo mpanao ratsy ireo. Raha tsy nisy ny fiovana dia omaly folakandro ireo jiolahy roa ireo miaraka amin’ilay mpamily bajaj izay mpiray tsikombakomba tamin’izy ireo no natolotra ny Fampanoavana.